Dr. Tint Swe – Page7– Healthy Life Journal
Q. နှုတ်ခမ်းတွေခြောက်ပြီး နေရခက်နေလို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. Cracked lips နှုတ်ခမ်းကွဲတာလို့လည်းခေါ်တယ်။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ပြီး ကွဲနေတာပါ။ ရာသီဥတု အေးတဲ့အချိန်မှာ ပိုဖြစ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းကို စွတ်စိုနေအောင် ကာကွယ်မှုပေးထားတဲ့ Oily film အလွှာပါးပါးလေးက...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ သမီးက အသက်၂၄နှစ်ပါ။ နားတစ်ဖက် မကြားရတော့လို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ လောက်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အလုပ်မှာတနေ့လုံး အကောင်းပါ။ ညကျတာ့ ရင်ဘက်အောင့်တယ်ဆိုပြီး အိပ်ပြန်ပါတယ်။ မနက်လည်းထရော ဘယ်လိုမှ ထလို့မရတော့ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့လည်း စောင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ဆရာဝန်ခေါ်ပြီး အိမ်မှာပြပါတယ်။...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေဖြေကြားသည်။ ကျွန်မချစ်သူ ခြေထောက်မှာ ငါးမျက်စိအဖုလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ် သင့်ပါသလဲ။ ဆေးစားလို့ရလား။ သူကတော့ ခွဲရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ် တာလဲ ဆိုတာရယ်။ ဘယ်လိုသတိပြု နေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါရှင့်။ ဟုတ်တယ်။ “ငါးမျက်စိ”လိုမျိုး လူတော်တော်များများ ဖြစ်ကြတယ်။...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဖြေကြားသည်။ မေး- Allergic ဖြစ်နေတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ အရက်ဘီယာသောက်ရင်၊ ငါး၊ ပုစွန်၊ ခရမ်းသီး စားရင် ဖြစ်ပါတယ်။ မနက် အိပ်ရာထနဲ့ ညအိပ်ခါနီးမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ထမင်းအချိန်မှန် မစား ရင်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။...
သည်းခြေအိတ် ထုတ်ထားသူ (Cholecystectomy)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး. (၁) ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက သည်းခြေထုတ်လိုက်တယ်။ ကျောက်ဖြစ်လို့။ မေး. (၂) သည်းခြေကျောက်တည်နေသော ဝေဒနာ နောက်ဆက်တွဲအကြောင်း သိလိုပါသည်။ သည်းခြေထုတ်ပစ်လိုက်ပါက လူ့သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်ပါသလား ဆရာ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် သည်းခြေသည် အရေးကြီးသည့်အပိုင်းတွင် ပါဝင်သည့်အတွက် သည်းခြေထုတ်ပစ်လိုက်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့်...
မေး. ဆရာ လေဖြတ်ရောဂါကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. – Paralysis လေဖြတ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကများတယ်။ အာရုံကြောစနစ်၊ အထူးသဖြင့် ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောမှာ တခုခုဖြစ်ရာကနေဆက်ဖြစ်တယ်။ – Trauma with nerve injury ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး. ကျွန်မယောင်းမက အသက် ၄၁ နှစ်ပါ။ အသက် ၂၅နှစ်ကနေစပြီး သွေးတိုးကျဆေး ဆက်တိုက်သောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ကျောက်ကပ် ကျုံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ နယ်မှာနေတော့ သွေးတိုးကျတဲ့ဆေးကိုသောက်ပြီး တခြားရောဂါကို မစစ်ဆေးခဲ့ဖူးပါ။ အခုပါမောက္ခ – -နဲ့ ပြတော့ ဆရာက...
ရုတ်တရက် နှလုံးအတက်ရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ (Acute Heart Attack Treatment)
မေး. ဆရာရုတ်တရက် နှလုံးအတက်ရခြင်း (Acute heart attack)ကို ပြုစုကုသနည်းလေးသိပါရစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. (၁) လက်ကောက်ဝတ်သွေးကြောခုန်တာ (နှလုံးခုန်)နဲ့ သွေးဖိအား BP စမ်းပါ။ တည်ငြိမ်ပါသလား။ (၂) Ventricular fibrillation နှလုံးအောက်ခန်း ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့...